သာလွန်းခဲ့တယ်…. | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : ♥တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့♥ - Tuesday, March 11. 2008
တက္ကသိုလ်တက်စ နှစ်တွေမှာ သူ့သီချင်း၊ စာသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူငယ်ချင်းယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ စကားအခြေအတင်ငြင်းခုံ ခဲ့ကြဖူးတယ်..။ သူ့ သီချင်းတွေကို ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရတဲ့ ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းယောင်္ကျားလေးတွေက ဝေဖန်ကြတယ်လေ။ “အဲဒါကမှ အနှစ်တွေ၊ စာသားတွေကို ခံစားကြည့်လိုက်” လို့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျက်လုံးပြူးပြီး ကြည့်နေလိုက်တယ်။
(ဆရာထီးသီချင်းတွေကို လုံးဝ မနှစ်သက်ခဲ့ဖူးသော…
Categories : Music , Comments :2Comments
Defined Tags : Music, စာစု, စိုင်းထီးဆိုင်
Random Entry: ဘ၀ဋီကာ
< ညစာ (နောက်ဆက်တွဲ) | စကားတတ်သော ကြက်တူရွေး >
မေ၁၅ on Tuesday, March 11. 2008 :
သူ့သီချင်းတွေကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တာပါ။ အိမ်မှာ အဖေအမေ နဲ့ ဦးလေး အဒေါ်တွေ ခနခနဖွင့်ကြလွန်းလို့။ အသက် ၅၈နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်နဲ့ လူ့သက်တမ်းတစ်ခု ပြီးဆုံးသွားပြီလား။
yaykhaenget on Wednesday, March 12. 2008 :
မအိမ့်ချမ်းမြေ့နဲ့ ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်. ကိုစိုင်းထီးဆိုင်ဟာ ဂန္တ၀င်အဆိုကျော်တစ်ဦးပါပဲ. မေမြို့မိုး၊ အချစ်ထောင်၊ မောတော့မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး စတဲ့ သီချင်းစာသားလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရင်ကို အခုချိန်ထိ ကိုင်လှုပ်နေနိုင်ဆဲပါ.
နောက်နောင်ဘ၀တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း သူချစ်တဲ့ ဂီတနဲ့ လောကကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလေ...
In reply to [ Top level ]#1: မေ၁၅ on 2008-03-11 07:56 #2: yaykhaenget on 2008-03-12 00:21